EJIRI EGWUREGWU NYOCHAA GIGABYTE AORUS AD27QD - AKỤKỌ - 2019
Gigabyte na-akwadebe ịhapụ ihe nyocha mara mma 27 nke Aorus AD27QD. Ihe ọhụrụ, dịka onye na-emepụta kwuru, ga-enwe ike inye ndị egwuregwu ihe karịrị ndị iro na egwuregwu kọmputa.
Gigabyte Aorus AD27QD dabeere na panel panel nke IPS na mkpebi nke 2560x1440 pikselụ na oge kachasị elu nke 144 Hz. Ikwu ihuenyo kachasị mma bụ 350 cd / m2, na ọdịiche - 1000 ruo 1. Kwupụtara nkwado maka teknụzụ AMD FreeSync na DisplayHDR 400.
Usoro nke ngosipụta ahụ bụ otu ọrụ ndị ọzọ ga-aba uru nye ndị Fans nke agha ịntanetị. Karịsịa, ihe nyocha ahụ nwere ike igosi ihe ngwongwo na-eme ka ọnọdụ ndị gbara ọchịchịrị mara maka ịchọpụta ndị iro. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaọrụ ahụ nwere usoro nkwụsịtụ mkpọtụ, nke a na-arụ ọrụ mgbe ejiri igwe okwu.
Na-akwụ na oge nke ịnweta Gigabyte Aorus AD27QD na ire ere anaghị akọ.